I-China Flour Milling Equipment Factory, Umhlinzeki Wensiza Yokugaya Ufulawa
Womoya Roller Mill
Isigayo se-pneumatic roller sigaya umshini wokugaya okusanhlamvu omuhle wokucubungula ummbila, ukolweni, ukolweni we-durum, i-rye, ibhali, i-buckwheat, amabele nemithombo.
Umshini wokugaya kagesi umshini wokugaya okusanhlamvu ofanele wokucubungula ummbila, ukolweni, ukolweni we-durum, i-rye, ibhali, i-buckwheat, amabele nemithombo.
Izinsiza kusebenza Zentengo Yokugaya Izinambuzane
Imishini yokugaya izinambuzane isonakalisi esetshenziswa kabanzi kwizigayo zikafulawa zesimanje ukwandisa ukukhishwa kukafulawa nokusiza isigayo.
I-detacher yomthelela ikhiqizwa ngokuya ngomklamo wethu osezingeni eliphakeme. Umshini wokucubungula osezingeni eliphakeme namasu kuqinisekisile ukunemba okufiselekayo nekhwalithi yomkhiqizo.
Umshini omncane wokugaya ufulawa wokuhlunga.
Imiklamo evulekile nevaliwe yegumbi iyatholakala, Ukuhlunga nokuhlukanisa izinto ngokuya ngosayizi wezinhlayiyana, Isetshenziswa kakhulu esigayweni sefulawa, esigayweni selayisi, esigayweni sokuphakelayo, Esisetshenziswa nasezimbonini zamakhemikhali
IMono-Section Plansifter inesakhiwo esihlangene, isisindo esincane, nokufakwa okulula nenqubo yokuhlola yokuhlola. Ingangeniswa kabanzi emishinini yesimanje kafulawa kakolweni, ummbila, ukudla, kanye namakhemikhali.
I-twin-section plansifter iwuhlobo oluthile lwento yokusebenza yokugaya ufulawa. Isetshenziselwa ukwehliswa kokugcina phakathi kokuhlungwa ngeplansifter kanye nofulawa opakishwa emishinini kafulawa, kanye nokuhlukaniswa kwezinto ezishubile, ufulawa kakolweni omuncu, nezinto ezisetshenzisiwe eziphakathi.
I-Flour mill purifier isetshenziswa kabanzi emishinini yesimanje kafulawa ukukhiqiza ufulawa ngekhwalithi ephezulu. Kusetshenziswe ngempumelelo ukukhiqiza ufulawa we-semolina ezindaweni zokugaya ufulawa we-durum.
Njengomshini wokugaya okusanhlamvu, isigayo sethu sesando se-SFSP singakwazi ukushaya izinhlobo ezahlukahlukene zezinto eziyimbudumbudu ezifana nommbila, amabele, ukolweni, ubhontshisi, ikhekhe le-soy bean pulp cake, nokunye. Ifanele izimboni ezinjengokukhiqizwa kwefolishi nemikhiqizo yokwenziwa kwepowder.
Isiphelisi se-bran singasetshenziswa njengesinyathelo sokuphela sokwelapha i-bran ehlukaniswe ekugcineni kolayini wokukhiqiza, ngokuqhubekayo ukunciphisa okuqukethwe kofulawa ku-bran. Imikhiqizo yethu ifaka ngosayizi omncane, amandla aphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okusebenziseka kalula, inqubo elula yokulungisa, nokusebenza okuzinzile.
YYPYFP uchungechunge womoya roller isigayo isakhiwo icwecwe ngamandla aphezulu, ukusebenza esitebeleni nomsindo ongaphakeme, ukusebenza kuyinto elula nge ukugcinwa lula futhi ongaphakeme ukwehluleka rate.